Modely 37 ho an'ny diplaoma sy mari-pankasitrahana maimaim-poana tanteraka | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | dia midika hoe, Templates, Tutorials
Miverina izahay miaraka amina maodely maimaimpoana miaraka amin'ny tanjona napetraka ao amin'ireo diplaoma izay matetika omena any amin'ny faran'ny fandaharam-pianarana ary izany dia mazàna manamarina ny haavon'ny fandalinana. Fomba iray anehoana an-tsary ny nandanianao fotoana nanatanjahan-tena tamina lohahevitra manokana mba hananana fototra ampy hahafahana manatontosa asa amin'ny fomba tsara kokoa.
Noho io antony io dia hizara maodely maimaimpoana 35 ho anao izahay amin'ny karazan-diplaoma rehetra, ka ahitanao karazana fiovana maro samihafa hahitanao ny tonga lafatra amin'ilay asa atao. ny misy ho an'ny sekoly, akademia na koa sasany ho an'ireo fifaninanana ireo izay tanterahina ao anaty dobo hitazonana ireo ankizy kely ao an-trano faly sy mifaly. Nampidirinay koa ny tutorial izay hazavainay, tsikelikely, ny fomba famoronana diplaoma amin'ny PowerPoint.
1 Fifidianana modely ho an'ny diplaoma
1.1 Taratasy fanamarihana fankasitrahana amin'ny fomba fiota
1.2 Taratasy fanamarihana klasika volamena taloha
1.3 Diploma antitra miaraka amina firavaka
1.4 Fanamarihana mihaja miaraka amin'ny antsipiriany volamena
1.5 Taratasy fanamarihana
1.6 Fanamarihana fankasitrahana mahafinaritra miaraka amin'ny endrika Geometrika loko
1.7 Famolavolana modely fanamarinana
1.8 Modely fanamarinana fahombiazana polygonal Green
1.9 Fanamarihana mendri-kaja
1.10 Taratasy fanamarinana amin'ny fanekena telozoro mena
1.11 Taratasy fanamarihana zava-bita miloko feno
1.12 Diplaoma miaraka amina endrika mahazatra
1.13 Modely diploma ho an'ny ankizy miloko
1.14 Fanamarihana voaravaka endrika manga sy tsipika volamena
1.15 Drafitra fandresena clipart ho an'ny ankizy
1.16 Modely diploma mavesatra mavesatra
1.17 Famintinana ny tsipika fanamarinana
1.18 Modely diploma amin'ny oniversite
1.19 Famaritana ny boky misy ny diplaoma sy ny mortarboard
1.20 Diplaoma kanto misy tombo-kase
1.21 Taratasy polygonal mavo sy mavokely
1.22 Modely fanamarinana haingon-trano
1.23 Diploma tsara tarehy miaraka amin'ny antsipirian'ny firavaka
1.24 Fanamarihana misy endrika geometrika manga
1.25 Famolavolana fanamarinana maoderina miaraka amin'ny endrika geometrika mena sy mainty
1.26 Diploma tsara ho an'ny ankizy
1.27 Modely diploma misy litera miloko
1.28 Zazalahy diplaoma manan-janaka mahatsikaiky
1.29 Taratasy fanamarinana diplaoma misy triangles miloko
1.30 Taratasy fanamarihana misy rafitra firavaka volamena
1.31 Voaravaka ny môdely fanamarinana
1.32 Diplaoma tsara tarehy miaraka amin'ny firavaka haingo
1.33 Fanamarinana maoderina
1.34 Modely diploma taloha
1.35 Diploma haingon-trano mendrika ny endriny mahazatra
2 Aiza no hanaovana diplaoma maimaim-poana
2.2 Milalaova amin'ny fitambarana typografika sy ny ambaratongan'ny lahatsoratra
2.3 Azonao atao ny manasonia nefa tsy miala amin'ilay programa
3 Ahoana ny fomba hanaovana diplaoma virtoaly
3.3 1,2,3 Fanamarinana
Fifidianana modely ho an'ny diplaoma
Taratasy fanamarihana fankasitrahana amin'ny fomba fiota
Este taratasy fanamarinana fankasitrahana amin'ny fomba fiotazana Safidy mahazatra sy kanto izy io, diplaoma mety hanamarinana ireo raharaha matotra sy ara-dalàna.
Taratasy fanamarihana klasika volamena taloha
Safidy iray hafa mahazatra sy kanto, ny taratasy fanamarinana kilasika volamena taloha Safidy tsara io raha mitady diplaoma mamindra ny hakantony sy ny exclusivity ianao.
Diploma antitra miaraka amina firavaka
Raha tsy be dia be ianao amin'ny volamena sy ny feo mamiratra eto dia manana safidy hafa ianao, a mari-pahaizana antitra miaraka amina firavaka amin'ny feo manga, miaraka amina karazana script sy serif typeface, feno fahamendrehana.
Fanamarihana mihaja miaraka amin'ny antsipiriany volamena
Este taratasy fanamarinana miaraka amin'ny antsipiriany volamena Izy io dia ny fanehoana ny haitraitra, endrika mahazatra fa misy fikitihana maoderina. Amin'ny feo beige ary miaraka amina endritsoratra serif sy sans-serif tena mahaliana.
Este taratasy fanamarinana mari-pankasitrahana dia iray amin'ireo safidy ofisialy indrindra amin'ity fanangonana ity, ny lokon-doko mena dia mifanohitra amin'ny lokon'ny volomaso sy ny manta amin'ny endrika manome azy ny fanavahana.
Fanamarihana fankasitrahana mahafinaritra miaraka amin'ny endrika Geometrika loko
Este taratasy fanamarinana miorina amin'ny endrika geometrika safidy tanora sy ankehitriny io. Ny fampiasana loko sy ny endriny matevina sans-serif mibodo ny toerana lehibe dia manome endrika maoderina azy.
Famolavolana modely fanamarinana
iray hafa diplaoma kanto, tsotra kokoa noho ireo teo aloha. Ny volamena no loko mety indrindra hanomezana endrika voadio sy manavaka ny endrika
Modely fanamarinana fahombiazana polygonal Green
Este diplaoma voaravaka endrika geometrika Amin'ny loko maitso dia safidy kanto sy maoderina io izay azo antoka fa handresy anao. Ny endriny dia be dia be ary afaka miasa amin'ny toe-javatra rehetra.
Ny fitambaran'ny mainty sy volamena dia tena kanto sy manavaka. ATSINANANA taratasy fanamarinana mihaja Io no safidy tadiavinao raha mila diplaoma maoderina ianao, fa miaraka amin'izay dia mamindra toetra amam-panao manokana sy manokana.
Taratasy fanamarinana amin'ny fanekena telozoro mena
iray hafa taratasy fanamarinana maoderina sy kanto, ny loko manome endrika tanora kokoa sy manintona an'ity taratasy fanamarinana fankasitrahana ity misy triangles mena.
Taratasy fanamarihana zava-bita miloko feno
Ny manga sy ny mavo, ny loko lehibe amin'ity famolavolana ity, dia mitambatra tanteraka. Mavo, loko mafana ary manga, loko mangatsiaka, manambady tanteraka ary mifameno tanteraka. Amin'ity taratasy fanamarinana fahombiazana miloko feno Ity fitambarana ity dia lakilen'ny famoronana endrika maoderina sy manaitra.
Diplaoma miaraka amina endrika mahazatra
Raha aleonao kokoa ny loko dia ity no taratasy fanamarinana tadiavinao. ATSINANANA diploma miaraka amina endrika mahazatra Izy io dia manana endrika minimalista, tsy mifidy afa-tsy loko roa, maizina amin'ny mazava, izay manome endrika tena voadio.
Modely diploma ho an'ny ankizy miloko
Raha mitady mari-pankasitrahana momba ny zaza ianao dia ity maodely an'ny mari-pahaizana momba ny ankizy miaraka amina endrika tena miloko dia ho tianao izany. Tena ilaina izany raha toa ka manolo-tena amin'ny fampianarana ianao, ohatra, ary te hanome loka manokana an'ireo mpianatrao.
Fanamarihana voaravaka endrika manga sy tsipika volamena
Diploma tena kanto, ity ctaratasy fanamarinana voaravaka endrika manga sy tsipika volamena mamoaka ny hakantony sy ny tsiro tsara izany. Ny typeface sans-serif, misy habe samy hafa dia manome endrika maoderina kokoa ity maodely ity.
Drafitra fandresena clipart ho an'ny ankizy
Loharano lehibe iray hafa amin'ny fampianarana. Ity mari-pahaizana ity Izy io dia manana fijery mahafinaritra be ary azo antoka fa ho tian'izy ireo izany. Ny safidy typographic dia toa nahomby tokoa ary ireo sary dia manome endrika ity famoronana ity.
Modely diploma mavesatra mavesatra
Este diploma miaraka amina endrika miloko maitso sy manga mifototra amin'ny endrika miolikolika, safidy tena tsara, amin'ny antsipiriany ary mahomby izy io.
Famintinana ny tsipika fanamarinana
Ny famolavolana ity taratasy fanamarinana ity Mahavariana sy mamorona izy io, ny fitambaran'ny endriny dia manome azy hetsika iray izay mahatonga azy io ho safidy hafa noho ny teo aloha.
Modely diploma amin'ny oniversite
Ankizy sy mahafinaritra ity famolavolana ity, mety be ny sary a diplaoman'ny oniversite ary ny loko dia azo antoka fa hisarika ny sain'ny zandriny indrindra. Ny typografika maroloko Fahombiazana lehibe amin'ity tranga ity!
Famaritana ny boky misy ny diplaoma sy ny mortarboard
Amin'ity tranga ity dia mitondra maodely ho anao izahay hiarahabana ny namanao, ny mpiara-miasa aminao ary ny fianakavianao tamin'ny fahavitan'izy ireo. ny mombamomba ny boky misy diplaoma sy mortarboard tena mety amin'ity hetsika ity.
Diplaoma kanto misy tombo-kase
Ny fitambaran'ny volamena, mavo miaraka amin'ny tsipika mena manantona amin'ny lohany diploma io safidy kanto sy kanto.
Taratasy polygonal mavo sy mavokely
Este taratasy fanamarinana miaraka amina endrika polygonaly mavo sy mavokely Safidy tena tsara raha mitady diplaoma miloko, maoderina ary tanora ianao.
Modely fanamarinana haingon-trano
Iray amin'ireo safidy kanto indrindra amin'ity fanangonana ity, ity modely fanamarinana haingon-trano Nandresy antsika tamin'ny hatsarany sy ny endriny mahazatra izy io.
Diploma tsara tarehy miaraka amin'ny antsipirian'ny firavaka
Volavola iray hafa amin'ny loko volamena, a diplaoma kanto feno antsipirian'ny firavaka, mety hoentina amin'ny fotoana manetriketrika sy ara-dalàna.
Fanamarihana misy endrika geometrika manga
Este taratasy fanamarinana miaraka amin'ny endrika geometrika Amin'ny loko manga hafa dia kanto izy io fa miaraka amina tanora milamina kokoa.
Famolavolana fanamarinana maoderina miaraka amin'ny endrika geometrika mena sy mainty
Raha mitady ianao endrika maoderina misy endrika maro loko, Ity fitambaran'ny endrika geometrika mena sy mainty ity dia hanaitra anao.
Diploma tsara ho an'ny ankizy
Este diploma tsara ho an'ny ankizy feno sary mamorona dia modely tena tsara, miaraka amina endrika miloko sy mahafinaritra.
Modely diploma misy litera miloko
Famolavolana hafa ho an'ny ankizy kely, ity mari-pahaizana diploma miaraka amina litera miloko Safidy mahafinaritra mitovy amin'izany na dia madio kokoa aza, tsy mavesatra entana. Amin'ity tranga ity dia nifidy ny hanambatra ny loko malefaka kokoa izy ireo izay manome fikitika hafa ity taratasy fanamarinana ity.
Zazalahy diplaoma manan-janaka mahatsikaiky
Ity mari-pahaizana ity endrika tsara indrindra izay mampita fifaliana sy dinamika. Ny zana mavo izay manodidina ny famolavolana dia manome azy fikitihana maoderina sy ny fitambaran'ny typeface boribory amin'ny loko isan-karazany dia manampy fa misy fiatraikany mahafinaritra tokony hananana taratasy fanamarinana natao ho an'ny ankizy.
Taratasy fanamarinana diplaoma misy triangles miloko
Ity dia iray amin'ireo volavola izay tena tiana amin'ity fanangonana ity, tanora izy io ary azo ampiasaina ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny fampifangaroana ny endrika geometrika sy ny loko misy loko ity taratasy fanamarinana diplaoma ity amina safidy mamorona mahery vaika ary teboka famolavolana sary izay tsy tianao.
Taratasy fanamarihana misy rafitra firavaka volamena
Este taratasy fanamarinana dia tena kanto sy ofisialyNy endri-javatra mahavariana indrindra amin'ny endrika dia ny firavaka haingo volamena izay mandrafitra ny lahatsoratra ary vita amin'ny famirapiratry ny tarehy.
Voaravaka ny môdely fanamarinana
Ity iray ity modely fanamarinana manaraka ny famolavolana kilasika sy minimalista ary miaraka amina lamaody taloha, dia safidy marobe izy io, manan-kery amin'ny toe-javatra rehetra, zava-bita na hetsika. Ny takelaka mena dia manampy loko ny diplaoma.
Diplaoma tsara tarehy miaraka amin'ny firavaka haingo
Ity safidy mahazatra ity amin'ny endrika manga Safidy tena tsara izy io, mandanjalanja tokoa ny endriny ary manome endrika hafa azy ny volavolan-damosina. Raha mila taratasy fanamarinana ianao amin'ny fotoana ara-dalàna ity diplaoma kanto misy haingon-trano ity dia ilay tadiavinao fotsiny.
Ny salmon mitambatra amin'ny manga turquoise dia baomba, ity fanamarinana maoderina ity Tonga lafatra izy io raha mitady diplaoma ankehitriny, tanora ary tsara.
Modely diploma taloha
Este modely diploma antitra Safidy iray hafa tena kilasika sy kanto izy io, ny lamosina misy tsipika misoko mangina ary ny mifanohitra amin'ireo singa maizina dia mahatonga azy io ho endrika mahaliana.
Diploma haingon-trano mendrika ny endriny mahazatra
Este mari-pahaizana diploma miaraka amina endrika mahazatra manaraka famolavolana mitsangana tsotra nefa tena kanto, miaraka amin'ireo singa haingon-trano fototra hahatonga azy io ho endrika kanto miaraka amina fitambarana typografika tena tsara.
Aiza no hanaovana diplaoma maimaim-poana
Raha te hanao mari-pahaizana manokana ianao, PowerPoint dia safidy tena tsara. Ity programa ity, natao indrindra hanaovana famelabelarana, manolotra fitaovana tena ilaina ho anao mba hamoronana mora foana ny volanao manokana.
Miaraka amin'ny fitaovana miendrika endriny, azo alaina ao amin'ny sisiny fampidirana, ianao dia afaka manampy singa sary izay hahatonga ny endrikao ho manintona kokoa. Ankoatr'izay, azonao atao ny manamboatra azy ireo amin'ny takelaka «endrika endrika» ary amin'ny alàlan'ny alàlan'ny safidy «manova teboka» dia azonao atao ny mamorona endrika abstract. Manambatra endrika samihafa, milalao loko, habe ary miolakolaka afaka mamorona diplaoma na mari-pankasitrahana tena izy ianao. Azonao atao koa ny manampy gradients, hanome feo ny fitambarana.
Milalaova amin'ny fitambarana typografika sy ny ambaratongan'ny lahatsoratra
Ny typefaces dia manana lanjany lehibe Amin'ny famolavolana. Miankina amin'ny dikan'ny diplaoma dia azonao atao ny misafidy fitambarana typographic na hafa. Raha hanao diplaoma ianao hanatontosanao any amin'ny sekolin-jaza, ohatra, dia azonao atao ny mampiasa endritsoratra sans-serif sy endritsoratra endriny. sora-tanana, ary atambaro amin'izy ireo amin'ny loko mamirapiratra sy falifaly. Etsy ankilany, raha fanamarinana matotra sy kanto kokoa izy io, dia azonao atao ny misafidy ny hanambatra ny typiface serif miaraka amin'ny typeface sans-serif. Raha mila aingam-panahy ianao hahitana ny safidy tonga lafatra, azonao atao ny manamarina ny sasany amin'ireo ireo fitambaran-tsoratra izay hatolotray anao.
Ho fanampin'ny fiheverana ny typeface, zava-dehibe ny filalaovanao ny habe sy ny hatevin'ny endritsoratra hametraka ambaratonga ambony. Raha mahomby ianao, ho azo vakiana kokoa ny diplaomanao ary noho izany dia manintona kokoa ny fahitana.
Azonao atao ny manasonia nefa tsy miala amin'ilay programa
Ao amin'ny kinova farany an'ny PowerPoinMisy ny takelaka «manintona» misy. Ity fitaovana ity dia ahafahanao manao kapoka maimaimpoana. Manolotra karazana borosy telo izy: penina, pensilihazo ary fanamafisam-peo. Ny fanamboarana azy rehetra dia azo ovaina ka azonao atao ny manamboatra ny hateviny sy ny loko.
Mety ho ity fitaovana ity ilaina handravaka ny taratasy fanamarinana, indrindra raha mahay sary ianao, fa ny tena mahaliana dia ny fisaorana azy ho afaka hanao sonia ny diplaoma ianao nefa tsy mila miala amin'ilay programa. Tsy mila misafidy penina mainty ianao, miaraka amina teboka tsara, ary manasonia ilay antontan-taratasy. Hanao fotoana be ianao!
Ahoana ny fomba hanaovana diplaoma virtoaly
Tsy ny PowerPoint ihany no safidy hamoronana diplaoma, azonao atao izany diploma virtoaly nefa tsy mila mametraka programa akory. Ireto ny sasany amin'ireo fitaovana tena ilaina hamoronana mari-pankasitrahana an-tserasera. Ny zavatra tsara indrindra dia afaka tanteraka izy ireo.
Canva dia fitaovana famolavolana an-tserasera ary famoronana votoaty marobe. Manolotra modely ho an'ny ankamaroan'ny zava-drehetra izy, ary mazava ho azy, ho hitanao koa ny maodely ho an'ny karazana mari-pahaizana. Fitaovana maimaimpoana afaka misafidy ny maodely tianao ianao, manova ary manamboatra azy tsy miala amin'ny tranokala. Ampiasao ny motera fikarohana mba hamaritana ny karazana fanamarinana tadiavinao ary hahazo sosokevitra tsara kokoa. Canva koa dia manana kinova pro, na dia manana ny loharanon'ny kinova maimaimpoana aza dia manana mihoatra ny ampy fotsiny ianao tandremo ary aza mampiasa modely voafetra izay mitaky fandoavana.
Ho hitanao ato amin'ity tranonkala ity modely samihafa amin'ny diplaoma. Ny zavatra tena mahaliana dia hoe ankoatry ny mamela ny fisintomana amin'ny PDF hanontana sy hamenoana azy ireo amin'ny tanana, dia manome anao ny safidy hamenoana azy ireo mivantana amin'ny tranonkala misintona kinova farany.
Na dia amin'ny teny Anglisy aza ny tranonkala sy ny modely, amin'ny 1,2,3 Fanamarinana azonao atao ny manitsy ny lahatsoratr'ireo modely ka tsy ho olana io. Ny tena tiako indrindra amin'ity tranonkala ity hanao fanamarinana virtoaly dia izany Ny diplaoma dia azo ovaina 100%: azonao atao ny misafidy loko, habe, orientation, typography ary manampy sary ny anao aza Maimaimpoana ary tena mora ampiasaina!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Templates » Modely diploma 37 maimaim-poana
Famintinana tsotra fotsiny!
Fotoana vitsy lasa izay dia nanao toy izany koa aho, fa nesoriko ny satroko amin'ny kalitaon'ny paositra, ny fomba fandaminana ny lohateny sy ny fanangonana mari-pahaizana.
Fialonana mahasalama izany haha ​​... Salama!
Miarahaba an'i Esteban! Tiako ny tianao ny fanangonana!
mache dia hoy izy:
Misaotra, fandraisana anjara miavaka ho an'ny mpijery. Ny endrika Diploma sy mari-pahaizana tsara dia tsara, tsy mety nahita endrika tsara kokoa. Manome kintana 10 sy tontolo feno aho. Tena feno fankasitrahana.
Mamaly an'i Mache
Luis lopez Avalos dia hoy izy:
famoriam-bola tena tsara izy io, feno, voatendry ary tena mety. Misaotra betsaka. Dr Luis lopez
Valiny tamin'i Luis lópez Avalos
Richard R. dia hoy izy:
Misaotra betsaka!! super Recommended!
Valiny tamin'i Ricardo R
EDWIN QUISPECURO NINA dia hoy izy:
MAHAY INDRINDRA AMIN'NY TEMPLATE CERTIFICATE.
Valio amin'i EDWIN QUISPECURO NINA
Salama Andriamanitra hitahy anao azafady ilaiko ianao hitari-dalana ahy hanao diplaoma miaraka amina frame, ary hanana fiaviana mazava amin'ny Baiboly malalaka ary afaka manoratra ny vaovao entiko tsy misy olana. MISAOTRA ANAO
Mamaly an'i alexandra
Salama, izaho dia manana ilay fanontaniana napetrak'ilay zazavavy Alexandra, manandrana manao zavatra mitovy amin'izany aho ary tsy afaka misaotra anao.
Mamaly an'i ximena
Heuresis dia hoy izy:
Sary an'ohatra fotsiny ve izy ireo? maninona no lazaina fa maimaim-poana? tsy afaka misintona sy mampiasa azy ireo ianao.
Mamaly an'i Heuresis